Coachinng – Today Business
Posted on January 21, 2020 by Htin Aung
Direct Coaching model အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Direct Coaching model ဆိုတာကတော့ ဘဝမှာ မိမိလိုချင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုရအောင် ပြုလုပ်ရမယ့်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အမျိုးမျိုးထဲကမှ အကိုက်ညီဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရွေးချယ်ချမှတ်ရာမှာ စဉ်းစားရမယ့် အကြံများကို ဦးတည်ဗဟိုပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုမပြုလုပ်ခင် မိမိဘက်မှ အရင်ဆုံးစဉ်းစားသင့်တဲ့ idea စဉ်းစားပုံကို လေ့လာမှုတွေအရ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ model ဟာဆိုရင် Coach နဲ့ Coachee အကြား တစ်နည်းအားဖြင့် နည်းပြ နဲ့ သင်ယူသူ အကြားမှာ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု ၊ ပွင့်လင်းမှု နှင့် ရိုးသားလေးစားမှုတွေရှိကြအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။
ဒီ Coaching process ကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာ Coachee ဟာဆိုရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရရှိလာမှာဖြစ်ပြီး လုပ်ရမယ့် goal ကိုပြတ်ပြတ်သားသားသိရှိလာကာ အဲ့မှတစ်ဆင့် အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်လာမှာပါ။ ပြောချင်တာက ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဖန်တီးပြုလုပ်ဖို့ နည်းကောင်းတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး Coaching ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ Coaching principles အကြောင်းကို အချက် ၃ ချင်ခွဲပြီးပြောပြပါမယ်။
1-Modify Behavior ပြောချငိတာက မိမိရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား နဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်သင့်ပါတယ်။
2-Make Decision ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို အဆုံးအထိအသုံးပြုကာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရပါမယ်။
3-Raise Awareness ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့သတိကိုမြှင့်တင်ရပါမယ်။ ပြောချင်တာက ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။ ပြုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကို အဆုံးထိရောက်အောင်ထားပါ။
Coaching process ၆ ဆင့်
1-Discover ကတော့ process တစ်ခုရဲ့ ပထမအစပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်ဆုံးမိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိအောင်လုပ်ရပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကနေ ဘာကောင်းကျိုးတန်းဖိုးတွေရနိုင်လဲ စတာတွေကိုစဉ်းစားရပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ Vision statment ရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်လို့ရပါပြီ။
2-Ignite ဆိုတာကတော့ မိမိရဲ့လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ ဝါသနာကို အဆုံးထိထားထားရပါမယ်။ Mission ချမှတ်ပြီးမှတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာကို လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေရပါမယ်။ မရှိပါက ရှိလာအောင် mood သွင်းပါ။
3-Reveal ကတော့ မိမိမှာရှိတဲ့ talent အရည်အချင်းနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့အင်အားကို သိအောင်လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် ရရှိလာမယ့် ကောင်းကျိုး opportunity နဲ့ အားသာချက်များကို သိအောင်ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရပါမယ်။
4-Empower ကတော့ အရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကို စုစည်းပြီး မိမိရဲ့ပန်းတိုင် goal ကိုရရှိအောင် perfect ဖြစ်နေတဲ့ plan များချမှတ်ရပါတော့မယ်။
5-Change ကတော့ လက်ရှိပြုလုပ်နေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြောင်းလဲသင့်ရင်ပြောင်းလဲရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ရရှိဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေသာမက စိတ်ထားနဲ့ အတွေးအခေါ်များကိုပါ ပြင်သင့်ရင်ပြင်ရပါမယ်။
6-Track ဖြစ်ပြီး ဒီအချက်ကတော့ အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးရဲ့အခြေအနေကို တိုင်းတာပြီး ပြင်သင့်ရင်ပြင်ရပါမယ်။ နောက်ဆုံးရလဒ်ရဲ့ progress ကိုတိုင်းတာရသလို perfomance ဘယ်လောက်ရှိလဲ မိမိလိုအပ်တဲ့ အခြေအနေရောက်ပြီလား စတာတွေကို စဉ်းစားကာ မိမိလိုချင်တဲ့အခြေအနေကို မရောက်မချင်း ရှေ့ကအချက်များကို ပြန်ကျော့ပြီး လိုအပ်သလို လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရာမှာ လွယ်ကူသွားမည်သာမက နည်းစနစ်ကျကျပါဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Executive Coaching (သို့မဟုတ်) SPRING Coaching Model
Executive Coaching (သို့မဟုတ်)
SPRING Coaching Model
Executive Coaching ကို မြန်မာလို အဓိပါ္ပယ်ပြန်ပါက “Executive” ဟာဆိုရင် စီမံခန့်ခွဲရေးဖြစ်ပြီး “Coaching” ဟာဆိုရင်တော့ လမ်းညွှန်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှာ အာဏာ(တာဝန်)အရှိဆုံးလူမှ မိမိကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းကိုကောင်းစွာလည်ပတ်ဖို့အတွက် လမ်းညွှန်ဦးဆောင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
Executive Coaching ကို S.P.R.I.N.G ဆိုတဲ့ Coaching Model အရအခြေခံပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
6-Go For It
🎯ပထမဆုံး ‘S’ ဖြစ်တဲ့ Set Up အကြောင်းပြောမှာပါ။ Deepak Chopra ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ အနာဂတ်မှာ မိမိဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့အတွက် ယခုပစ္စုန်ပ္ပန်အချိန်ကတည်းက အရာရာကိုလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရာမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ပြုလုပ်သင့်ပြီး တာဝန်ယူမှုလည်း အပြည့်ရှိရပါတယ်။
🎯ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘P’ ကိုတော့ Possibilities ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေများလို့ အဓိပ္ပါယ် ယူထားပါတယ်။ Possibilities ဖြစ်နိုင်ချေတွေက အရင်တုန်းကလည်း ရှိခဲ့သလို အခုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပြီး နောင်လည်းရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် မိမိဘက်က ဖြစ်ပြီးတာတွေကိုမှတ်သားထားပြီး ယခုလက်ရှိအချိန်မှာ အရင်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို သင်ခန်းစာအနေနဲ့ယူကာ လက်ရှိအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားလုပ်ဆောင်သင့်ပြီး နောင်အချိန်မှာရော ဘာတွေဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုတာတွေပါ စဉ်းစားတတ်ရပါတယ်။
🎯တတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘R’ ကို Resources လို့အဓိပ္ပါယ်ယူထားပါတယ်။ သင့်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြသာနာအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အင်းအားအပြည့်ရှိပါတယ်။ Resources ဆိုတာက မိမိမှာရှိတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား နဲ့ အတွေးအခေါ်တွေဖြစ်ပြီး ဒါတွေကို မိမိဘက်မှ အထိုက်အလျောက်အသုံးပြုပြီး ပြသာနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရပါတယ်။
🎯စတုတ္ထတစ်ချက်က ‘I’ ဖြစ်တဲ့ Interaction ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ Interaction ဆိုတာက တုံပြန်မှုကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး ပြောချင်တာက ပြသာနာတစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုတုံပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။ အဲ့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ့်အဆိုးရွားဆုံးပြသာနာများကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။
🎯ပဉ္စမတစ်ခု ‘N’ ကတော့ New understanding ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မိမိဘက်က လမ်းညွှန်မှုပြုလုပ်တတ်ဖို့ဆိုရင် နည်းအသစ်တွေကိုပါသိရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက မိမိဘက်မှ အဆက်မပြတ်လေ့လာသင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
🎯နာက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘G’ ကတော့ Go For it ကိုပြောထားတာပါ။ မိမိဘက်မှ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ခံစားပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက အခက်အခဲတစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းလောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော်လည်းပဲ မိမိဦးနှောက်မှပြုလုပ်သင့်သည်ဟုဖော်ပြနေပါက ရဲရဲရင့်ရင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
🎯အထက်ဖော်ပြပါအချက်များဟာဆိုရင် မိမိဘက်ကဦးဆောင်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လမ်းညွှန်စီမံမှုများပြုလုပ်ရာမှာ အထောက်အကူပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတိုင်းမှာ ဦးဆောင်သူတစ်ယောက်ကတော့ ရှိကိုရှိပါတယ်။ ဦးဆောင်သူရဲ့လမ်းညွှန်မှုကောင်းမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ရေရှည်တည်မြဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် ဦးဆောင်ရာမှာ နည်းစနစ်ကျကျနှင့်လမ်းညွှန်နိုင်ဖို့အတွက် Genius Coaching အကြောင်းလေးက်ို ပြောပြချင်ပါတယ်။
အခုပြောမယ့် Genius Coaching ကတော့ GROW model ကို ကိုးကားထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ပြောချင်တာက Coaching ရဲ့မျိုးနွယ်စုဆိုတာပါ။ GENIUS ဆိုတာကတော့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့ နာမည်အစလေးတွေကို ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စတဲ့ စကားလုံးအစလေးတွေကိုယူကာ နာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
🎯Goals ဆိုတဲ့ ပထမတစ်ချက်ကတော့ မိမိဘက်မှ လမ်းညွှန်ရမယ့် အလုပ်တစ်ခုလုပ်တာနဲ့ အရင်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ ၊ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ ၊ ဘယ်ကစလုပ်ရမလဲ နဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ အဆုံးသတ်ရမလဲ စတာတွေကို စဉ်းစားဖို့ပြောထားပါတယ်။
🎯Energy ကတော့ မိမိမှာ ဒီ project ကိုလုပ်ဖို့ လုပ်နိုင်စွမ်းအားအလုံအလောက်ရှိလား ၊ မိမိမှာတင်မက မိမိရဲ့နောက်လိုက် member အဖွဲ့ဝင်များကရော လုပ်နိုင်စွမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲ။ ပထမက ချမှတ်လိုက်တဲ့ Goal ကို အဆုံးသတ်ဖို့ ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲ ၊ အရေးကြီးတဲ့အလျောက် မိမိရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဒီ project ကိုလုပ်နိုင်အောင် အင်အားဘယ်လောက်ဖြည့်ပေးသင့်လဲ စတဲ့ Energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကို စဉ်းစားရပါတယ်။
🎯Nurture ကတော့ မိမိရဲ့ project ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် မြေတောင်မြှောက်ပေးစရာရှိရင် ထိုအရာတွေကို အားပေးအားမြှောက်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်။ ပြောချင်တာက စိတ်ကူးသစ် idea တွေအားလုံးကို စုစည်းကာ ဘယ်အရာကို ရွေးချယ်သင့်လဲ စတာတွေကို စဉ်းစားရပါတယ်။ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ idea တွေကို စဉ်းစားပြီး လုပ်ရဲသင့်သလို အစပျိုးလိုက်ပါက အဆုံးထိရောက်အောင် အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမယ်။
🎯Inhibitors ကတော့ မိမိရဲ့ project တစ်ခုကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ရာမှ ဘယ်သူတွေက ချုပ်ချယ်လာနိုင်မလဲ ၊ ဘယ်အရာတွေက အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်လဲ စတာတွေကို စဉ်းစားရပါမယ်။ အဲ့လိုပြသာနာမျိုးတွေမဖြစ်ခင် မိမိဘက်မှ ဘယ်လို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ၊ ဒီလုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်အရာတွေက အဓိကသော့ချက်တွေလဲ စတာတွေကို စဉ်းစားရပါမယ်။
🎯Utopia ကတော့ မိမိစဉ်းစားထားတဲ့ Idea တွေအလျောက် အလုပ်တစ်ခုက ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ အဲ့အလုပ်ကနေ ဘယ်လိုကျေနပ်စရာတွေပေးလဲ၊ ဘယ်လိုကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေရလဲ စတဲ့အချက်များကို Customer တွေရဲ့အစား မိမိဘက်ကပါ ခံစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ကျေနပ်မှုက ဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲ စတာတွေကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
🎯Steps ကတော့ အစကချမှတ်ထားတဲ့ Goal အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားလား ဘယ်လို အဆင့်အလိုက်လုပ်ဆောင်နေလဲ ၊ ကတိပေးထားတဲ့အလုပ်အတိုင်းလုပ်ထားလား စတာတွေကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် Coaching နဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်အချို့ကိုသိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Posted on January 17, 2020 January 20, 2020 by Htin Aung
OSKAR Coaching Model အကြောင်းလေးကို ဆွေးနွေးပြချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး OSKAR ဆိုတာဘာလဲ။
Affirm & Action နဲ့
တို့အားလုံးကိုပေါင်းပြီး OSKAR model လို့ခေါ်ထားတာပါ။ အဲ့တော့ ဒီစကားလုံး ၅ လုံးရဲ့အသေးစိတ်ကို ရှင်းပြပါမယ်။
1-Outcome ဆိုတာကတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ project တစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေကို အသားပေးစဉ်းစားရမှာပါ။ မိမိချမှတ်ထားတဲ့ mission နဲ့အညီ နောက်ဆုံးအခြေအနေကဖြစ်ပေါ်လာပြီလား။ နောက်ဆုံးအခြေအနေအထိရောက်အောင် ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်ဖို့လိုသေးလဲ စတာတွေကို စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းဟာ outcome ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက်မိမိဘက်က အမြဲတမ်းစေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့ detail ကျကျထောက်လှမ်းနေသင့်ပါတယ်။
2-Scale ကတော့ မိမိဘက်ကအခြေအနေကိုတိုင်းတာရမှာပါ။ မိမိလုပ်လိုက်တဲ့ project ကဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြီးပြီလဲ။ ဒီ project ကိုလုပ်တဲ့လူများတဲ့အလျောက်သူတို့ရဲ့ပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့ project ကိုတိုင်းတာလိုက်လို့ ရလာတဲ့အတိုင်းအတာဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွဲပြားနေမှာပါ။
3-Know-How… အဲ့တာကတော့ project ရဲ့ goal ကိုရောက်ဖို့အတွက် မိမိကဘယ်လိုတွေလုပ်ကိုင်သင့်လဲဆိုတာတွေကို သိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။ မိမိပြုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့ဆင်တူနီးပါးဖြစ်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို ယခင်က လုပ်ခဲ့ဖူးလား။ ဒါမှမဟုတ် အခြားတစ်ယောက်က လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလား စတာတွေပါ စဉ်းစားရပါတယ်။
4-Affirm and Action ကတော့ ကိုယ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့အညီ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြောထားတာပါ။ အောင်မြင်နိုင်ချေရှိတဲ့အချက်တွေကိုရွေးပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ လူကြိုက်များမယ်ထင်တဲ့အရာတွေကို ရွေးချယ်ကာ မရပ်တန့်ပဲ အောင်မြင်အောင်ရဲရဲတင်းတင်း ရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အရာတွေထဲမှာလည်း ဘယ်အချက်က ပိုကောင်းခဲ့လဲစတာတွေကိုပါ မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။
5-Review ကတော့ ဘယ်ဟာကသင့်အတွက်ပိုကောင်းလဲ။ အဲ့လိုပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကို သင်ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ စတာတွေကို review ပြန်ကြည့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ မိမိအတွက်ပိုသင့်တော်တဲ့နည်းကို အမြဲလိုက်နာရပါမယ်။ အဆင်မပြေရင်တော့ ရှေ့ဆက်မလုပ်တော့ပဲ ရပ်ထားလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာက မိမိရဲ့ Customer ကဘယ်သူလဲ၊ သူက ကိုယ့်ဆီက ဘာလိုချင်တာလဲ စတဲဲ့အရာတွေကိုတော့ အထူးခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပြီး လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက်အောင်မြင်မှာပါ။
ARROW Coaching Model
Coaching ဆိုတာက သင်တို့ရဲ့ မရေမရာဖြစ်နေတဲ့အရာများကို တိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေမျိုးရရှိပြီး လုပ်ဆောင်ချက်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ခြေအနေကိုရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ နည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒီ post မှာ Coaching နဲ့ပတ်သက်ပြီး Matt ဆိုတဲ့လူတစ်ဦး လေ့လာဖော်ပြထားတဲ့ ARROW Model အကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ARROW Model ဆိုတာက အကြောင်းအရာ ၅ မျိုးကိုအသားပေးစဉ်းစားထားတဲ့ model တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ARROW ရဲ့အဓိကအ​ကြောင်းအရာ​တွေက​တော့
Way Forward တို့ဘြဲဖစ်​ပါတယ်​။
ပထမဆုံးအချက်​ဖြစ်​တဲ့ Aims က​တော့ ရည်မှန်းချက်ပါ။ coach တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ client ကိုသူဘာလိုချင်လဲ ဘယ်​လိုရချင်လဲ စတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ သူကိုယ်တိုင် သူ့ကိုယ်သူသိရှိပြီး အဖြေကို client အနေနဲ့စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
​နောက်​တစ်​ခု Reality ကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်​ပြီး အားလုံးထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ client အနေနဲ့ သူတို့လုပ်ကိုင်ပြီးလို့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကို သူကိုယ်တိုင်သိရှိရပါတယ်။ သို့မှသာ Customer ဘက်မှ မိမိတို့ပေးလိုက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ကြိုက်၊ မကြိုက် သိရမှာပါ။
​နောက်​တစ်​ချက်​ Reflection ဟာဆိုရင်​ ပြန်လည်သုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်​တဲ့အတွက်​ သူ့ကိုလည်းအ​ရေးတယူ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။ သူရဲ့ဆိုလိုရင်းကဘယ်လိုလဲဆိုရင် client အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ Aims နဲ့ Reality ကြားက ကွာဟနေတဲ့အချက်ကိုသိရပါမယ်။ မိမိဘက်ကလိုချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာနဲ့ တစ်ထပ်တည်း ကျ၊ မကျ ကြည့်ရပါမယ်။
Options က​တော့ ရွေးချယ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများဖြစ်​တဲ့အတွက်​ client အနေနဲ့ စဉ်းစားထားတဲ့ Idea များကို တစ်စုတည်း စုစည်းပြီး ထို idea များထဲမှ အဆင်ပြေဆုံးအချက် ဒါမှမဟုတ် သူ့အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်များကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်အောင် ကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဘာကိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင် မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်အောင် coach ကကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
​နောက်​ဆုံးအချက်​ Way Forward က​တော့ ရွေးချယ်ရမည့်လမ်းကြောင်းများဖြစ်​တဲ့အတွက်​ မိမိဘက်​မှရွေးချယ်လိုက်တဲ့ option ကို ဆက်လက်ပြီး အောင်မြင်အောင် ကျင့်သုံးဖို့အတွက် client အနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ ရှိလဲဆိုတာကို စဉ်း​စားရမယ့်အပိုင်းဖြစ်​ပါတယ်​။
ပြီးတဲ့အခါ ဦးဆောင်ပြီး Coach လုပ်တဲ့သူနဲ့ coach အလုပ်ခံသူရဲ့အကြားမှာ ထားသင့်တဲ့ အချက် ၃ ချက်ရှိပါသေးတယ်။ ဒါတွေကတော့
Awareness ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ အာရုံစူးစိုက်​မှုဟာ client အပေါ်မှာ အချိန်ပြည့် ရှိနေပြီး သူ့ကို အပြည့်အဝသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားရပါ့မယ်။တစ်ခုသတိထားရမှာက ဝေဖန်မှုတွေမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှတ်ချက်တွေမပေးသင့်ပါဘူး။
Responsibility ကတော့ မိမိရဲ့ Coach အလုပ်ခံရသူ client တွေဟာသူတို့ရဲ့ တာဝန်ကို အပြည့်အဝယူနိုင်စွမ်း ရှိရပါတယ်။ တစ်ခုခု အမှားလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း တာဝန်ပြောင်းလွှဲတာမျိုး မလုပ်ပဲ မိမိတာဝန်ကိုမိမိတာဝန်အဖြစ်သာ ယူခိုင်းရပါမယ်။ coach နဲ့ client အကြားမှာ ယုံကြည်မှု ဆိုတာမရှိမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်။
Trust ယုံကြည်မှုကလဲ coach နဲ့ client ကြားမှာအရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။client အနေနဲ့ coach အပေါ်အပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိမှသာလျှင်အောင်မြင်တဲ့ coaching session တစ်ခုကိုအောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Coach တစ်ယောက်ဟာဆို မိမိရဲ့ clientတွေကို စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ပေးရပါတယ်။ သူတို့ပြောနေတာကို တလေးတစား နားထောင်ပေးသင့်သလို ကိုယ်ဟန်အမူအရာ အရပါမျက်လုံးချင်းစုံပြီး နားလည်မှုရှိစွာ စကားပြောသင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ Matt ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြံပေးချက်​တွေဖြစ်​တဲ့ ARROW Model ​ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Posted on January 17, 2020 by Htin Aung
O.S.C.A.R model နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့နမူနာမေးခွန်းများ
O.S.C.A.R model နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ လမ်းညွှန်ဦးဆောင်ခြင်း (coaching) ကိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ စဉ်းစားရမယ့် နမူနာမေးခွန်းများ
(၁) ရရှိလာမယ့် ကောင်းကျိုးရလဒ် -Outcome (O)
– ဒီလမ်းညွှန်ဦးဆောင်ခြင်းမှာ မိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
– ဒီနေ့အတွက် သင်ဘာလိုချင်လဲ?
– ရေရှည်အတွက် သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
(ဒီနေရာမှာ နောက်ဆုံးရလဒ်ကို မိမိကိုယ်တိုင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ ဖြေရှင်းတတ်ရပါမယ်။)
(၂) တိုင်းတာမှုများ သတ်မှတ်ခြင်း – Scaling (S)
– ယခုလက်ရှိအခြေအနေက ဘာလဲ?
– အမှန်တကယ် ဘာဖြစ်နေတာလဲ?
– ယခုလက်ရှိအခြေအနေကို ဖော်ပြပါ။
(ဒီနေရာမှာ သင်ကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာကို သိရှိရပါလိမ့်မယ်)
အတိုင်းအတာ ၀ မှ ၁၀ အထိ (အဆိုးဆုံးမှ အကောင်းဆုံးအထိ) အမှတ်သတ်မှတ်ရပါမယ်။
– ယခုလက်ရှိအခြေအနေကို အတိုင်းအတာဘယ်လောက်အထိ သတ်မှတ်မလဲ?
– ယခုလက်ရှိ သင်ဟာ x မှာရှိနေပြီး ဒီအခြေအနေထိရောက်အောင် သင်ဟာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ?
– လက်ရှိ x ထက် မြင့်တဲ့ x+1 အဆင့်ရောက်ရှိပါက သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
(၃) အခြေအနေများဖြေရှင်းပုံတို့ကို သိရှိနေခြင်း နှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်အား (သို့မဟုတ်) အရာရာကိုဆန့်ကျင်တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း – Know-How & Resources/ Counters (C)
– scale အတိုင်းအတာ0ထက် x တစ်ခုရရှိလာအောင် ဘယ်အရာတွေက သင့်ကို ပံ့ပိုးခဲ့သလဲ?
– ကိုယ့်အတွက် နောက်ဆုံးရလဒ်ရဲ့ နည်းနည်းလေးမဆိုဟာ အလိုအလျောက် ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလဲ?
– နောက်ဆုံးရလဒ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ သင်ဟာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ? ဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့လဲ?
– သင့်မှာ ဘယ်လိုရွေးချယ်မှုတွေရှိလဲ?
– ရွေးချယ်မှုတွေထဲမှ ဘယ်လို option တွေထပ်ရှိလဲ?
– ရွေးချယ်မှုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေလဲ?
– အကောင်းဆုံး အကျိုးဆက်ရရှိစေမယ့် ရွေးချယ်မှုက ဘာလဲ?
( ဒီနေရာမှာ မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ပိုမိုပြီးသတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။)
(၄) အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းနှင့် တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်ခြင်း – Affirm and Action
– ဘယ်အရာက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လည်ပတ်နေပြီလဲ?
– နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်သေးလေးက ဘာဖြစ်မလဲ?
– သင်က x နေရာမှာရှိနေပြီး x+1 အခြေအနေကိုရောက်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
– သင့်ဘက်မှ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်မှာလဲ?
– ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ?
– ဒီအရာကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူနဲ့အတူ လုပ်ဆောင်မလဲ?
– မိမိဘက်မှ လုပ်ဆောင်ချင်စိတ်ကို အတိုင်းအတာအဆင့် ၁ မှ ၁၀ အတွင်း ဘယ်လောက်အတွင်းမှာရှိလဲ?
(ဒီနေရာကတော့ မိမိရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို မိမိကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
(၅) ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – Review (R)
– ဘယ်အရာက ပိုကောင်းလဲ?
– အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာ ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ?
– အပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်လို့ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလဲ?
– နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့် အပြောင်းအလဲတွေကရော ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?
– သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအချက်တွေကို လုပ်ဆောင်မှာလဲ?
– ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူနဲ့ သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှာလဲ?
– ဒီလုပ်ဆောင်ချက်များဟာ အရင်က လုပ်ဆောင်ပြီးပြီလား?
– လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးဟာ နောက်ဆုံးရလဒ်တစ်ခုရရှိဖို့အတွက် ဧကန်အမှန် လုပ်ဆောင်နေတာလား?
(ဒီနေရာမှာ မိမိကိုယ်တိုင် နောက်ဆုံးရလဒ်တစ်ခုကောင်းမွန်စွာရရှိနိုင်ဖို့ အဆက်မပြတ်စစ်ဆေးနေပေးသင့်ပါတယ်။)
အထက်ဖော်ပြပါ နမူနာမေးခွန်းများကို လမ်းညွှန်ဦးဆောင်ခြင်းပြုလုပ်ရာမှာ မိမိကိုယ်ကို မေးသင့်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းများဟာ O.S.C.A.R model ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး စဉ်းစားထားတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted on January 17, 2020 January 17, 2020 by Htin Aung
Wealth Profile Square အ​ကြောင်းသိ​ကောင်းစရာ
ဒီတစ်​​ခေါက်​မှာ​တော့ Wealth Profile Square အ​ကြောင်းကို အ​သေးစိတ်​ရှင်းပြ​ချင်​ပါတယ်​။ Wealth Profile Square ဖြစ်​တဲ့ စတုရန်းပုံတစ်​ခု​ပေါ်မှာ လူ​အများက မိမိတို့ရဲ့ စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းမှာ လုပ်​​ဆောင်​ကျင့်သုံး​ပြီး ​တွေး​ခေါ်​နေ​လေ့ရှိတဲ့ အမျိုးမျိုး​သော စရိုက်​လက္ခဏာ ၈ ခုတို့ကို ချိတ်​ဆက်​ပြီး ​ဖော်​ပြရှင်း​လင်း​ထားတာဖြစ်​ပါတယ်​။ အရင်​ဆုံး ဒီစတုရန်း​အား ခွဲခြားထားပုံအဆင့်ဆင့်ကို ​လေ့​လာကြည့်​စေချင်​ပါတယ်​။ အ​ပေါ်ယံသာကြည့်ရင်​​တော့နည်းနည်းရှုပ်​သလိုဖြစ်​​နေပါလိမ့်မယ်​။ သေချာအကဲခတ်​ကြည့်ရင်​​တော့ ဒီပုံဟာ စတုရန်း ၄ ဖက်​ဖြစ်​​နေတဲ့အတွက်​ ကွက်​ကွက်​ကွင်းကွင်းအရင်​ဆုံး​တွေ့မြင်​ရတာက​တော့ Dynamo ၊ Blaze ၊ Tempo နဲ့ Steel တို့ဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။
Dynamo လို့နာမည်​သတ်​မှတ်​လိုက်​ရခြင်းက အချို့လူ​တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ဦး​နှောက်​မှ အလိုလိုသိတဲ့ အစွမ်း​ပေါ်မှာမူတည်​ပြီး မိမိတို့ရဲ့စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်​ဖြာ​လေ့ရှိတဲ့အတွက်​ ထိုလူမျိုးများကျ​ရောက်​​နေတဲ့အပိုင်းကို Dynamo Energy ရှိတဲ့လူများလို့​ခေါ်လိုက်​ရခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။
အချို့ကကျ​တော့ အချိန်​​ပေါ်မှာမူတည်​ပြီး အရာရာကိုနားစွင့်​နေ​နိုင်​​လေ့ရှိတဲ့အတွက်​ ထိုလူမျိုးများကို Tempo Energy ရှိသူများဟုသတ်​မှတ်​ထားကြပါတယ်​။
တဖန်​ အချို့ကကျ​တော့ လူအများနဲ့​ရော​ရော​နှော​နှော ​ပေါင်းသင်းဆက်​ဆံတတ်​​လေ့ရှိပြီး ​လူအများကို ပင်​ကိုယ်ဆွဲ​ဆောင်​တတ်​တဲ့အရည်​အချင်း​ရှိတဲ့အတွက်​ ထိုသူများမှာ Blaze Energy ရှိသူများလို့သတ်​မှတ်​ထားပါတယ်​။
တချို့ကျ​တော့လည်း လူ​တွေနဲ့ဘာသိဘာသာ​နေတတ်​​လေ့ရှိပြီး အရာရာကို စနစ်​အတိုင်းအဆင့်ဆင့့်လုပ်​​ဆောင်​တတ်​​လေ့ရှိတဲ့အတွက်​ Steel Energy ရှိသူများလို့ ခွဲခြမ်းထားခြင်းဖြစ်​ပါတယ်။​ ​အထက်​မှာ​ဖော်​ပြထားတဲ့ Energy တစ်​ခုစီမှာ လူအမျိုးအစား ၃ မျိုးစီအသီးသီးရှိ​နေတာကိုလည်း ​တွေ့ကြမှာပါ။
Energy ​တွေမှာလည်း Spring ၊ Autumn ၊ Summer နှင့် Winter စတဲ့ ရာသီအလိုက်​လဲခွဲခြားထားပါ​သေးတယ်​။ ဆိုလိုရင်းက ရာသီအလိုက်​ စီးပွား​ရေးစနစ်​က ​ပြောင်းလဲ​နေတာဖြစ်​တဲ့အတွက်​ ဘယ်​လိုရာသီမျိုးမှာ ဘယ်​လူမျိုးကိုသုံး​ပေးရင်​ အမြတ်​​ငွေများများရရှိပြီး ပန်းတိုင်​ကိုအမြန်​ဆုံးရရှိနိုင်​တယ်​လို့​ပြောထားခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။ အရိုးရှင်းဆုံး​ပြောရရင်​ မှန်​ကန်​တဲ့အချိန်​မှာ မှန်​ကန်​တဲ့လူအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပြီး ​အောင်​မြင်​မှုကိုရယူသင့်ပါတယ်​။ ပြီးတဲ့အခါ လူအမျိုးအစား ၈ ခုတို့ကို တစ်​ဆင့်ချင်း​ဖော်​ပြသွားပါမယ်​။
အရင်​ဆုံး dynamo energy အတွင်းကျ​ရောက်​​နေတဲ့ Creator အ​ကြောင်း​ပြောချင်​ပါတယ်​။ Creator က​တော့နာမည်​နဲ့လိုက်​​အောင်​ သူတို့ကအစပိုင်းကိုလုပ်​​ဆောင်​ရာမှာ သူတို့ရဲ့ဦး​နှောက်​ကိုအသုံးပြု​လေ့ရှိပြီး ဖန်​တီးနိုင်​စွမ်းမြင့်ကြပါတယ်​။ အဆုံးသတ်​ရာမှာ​တော့ သိပ်​မ​ကောင်းကြပါဘူး။ ​ပြောချင်​တာက သူတို့ဟာ လုပ်​ငန်းတစ်​ခုရဲ့ အစပိုင်းမှာ ​ကောင်း​ကောင်းဖန်​တီးနိုင်​စွမ်းရှိ​ပေမဲ့ အစဉ်​အမြဲဖန်​တီး​နေ​လေ့ရှိတဲ့အတွက်​ မိမိရဲ့​ငွေ​တွေဟာမလိုအပ်​တဲ့​နေရာမှာကုန်​သွား​လေ့ရှိကြပါတယ်​။ လုပ်​ငန်း​တစ်​ခုမပြီးဆုံးခင်​ အမြတ်​​ငွေမရခင်​မှာဘဲ မိမိရဲ့​ငွေအ​မြောက်​အမြားဟာ အသစ်​ဖန်​တီး​နေရင်း​နဲ့တင်​ ကုန်​သွားနိုင်​ပါတယ်​။ ဥပမာ​ပြောရရင်​ Walt Disney ဟာသူရဲ့ ကာတွန်းဇာတ်​​ကောင်​ကိုဖန်​တီးရာမှာ​အောင်​မြင်​မှုရရှိလိုက်​ပြီး ဆက်​လက်​ထိန်းသိမ်​နိုင်​ဖို့အတွက်​​တော့ ​နောက်​လူရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်​​နေတဲ့သ​ဘောမျိုးပါ။ သူဟာဆို ရုပ်​ရှင်​ရိုက်​လို့မပြီးခင်​မှာတင်​ သူ့ရဲ့​ငွေဟာကုန်​ဆုံးသွား​လေ့ရှိတတ်​ပါတယ်​။ အ​ကောင်းဆုံးနာမည်​ကြီးတီထွင်​နိုင်​သူများကို ဥပမာ​ပေးရရင်​ Bill Gate ၊ Walt Disney ၊ Jack Ma ၊ JK Rowlings နှင့် Steve Job တို့ဘြဲဖစ်​ပါတယ်​။
​နောက်​တစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ Star က​တော့ Dynamo နဲ့ Blaze energy အတွင်း​မှာ ကျ​ရောက်​​နေပြီး သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်​ကို သူတို့အတွက်​သုံးတာထက်​ တစ်​ပါးသူအ​ပေါ်မှာ အကူအညီ​ပေးလိုက်​တာက ပို​အောင်​မြင်​မှုရနိုင်​တဲ့အ​ကြောင်းကို ကြယ်​တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့အလင်း​ရောင်​အား မိမိကိုယ်​မှာထက်​ အခြားအရာမှာ ထွန်းလင်း​တောက်​ပမှု​ပေးလိုက်​တာက ပို​ကောင်းတယ်​လို့ ဥပမာ​ပေး​ဖော်​ပြထားပါတယ်​။ Creator က အစပိုင်း​ကိုတီထွင်​လိုက်​ပြီး Stars က​တော့ မိမိရဲ့ Brand ကို ​ကောင်းမွန်​စွာဖန်​တီးရာမှာ အလွန်​​တော်​ကြပါတယ်​။ သူတို့ဟာ မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်​ပိုင်အသင်းအဖွဲ့၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ​ပစ္စည်းတို့ကို​ကောင်း​အောင်​ပြုလုပ်​​နေမယ့်အစား မိမိကိုယ်​ကိုအရင်​ဆုံး အများလူမှ ယုံကြည်​နိုင်​စရာ​ကောင်း​အောင်​ပြုလုပ်​ကြပါတယ်​။ မိမိကိုယ်တိုင်​က တစ်​ပါးသူရဲ့ ယုံကြည်​လက်​ခံ​လေးစားမှုကိုရပြီးခါမှ မိမိကတစ်​ဖန်​ အခြားသူရဲ့ ပစ္စည်းများကို Brand တစ်​ခုဖြစ်​​အောင်​ပြုလုပ်​​ပေးခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။ အနီးစပ်​ဆုံး ဥပမာတစ်​ခု​ပေးရရင်​ ရုပ်​ရှင်​မင်းသား မင်း​သမီးများကိုသာ ကြည့်လိုက်​ပါ။ နာမည်​ကြီး Stars ​တွေက​တော့ Hillary Cliton ၊ David Beckham ၊ Beyonce Knowles ၊ Arnold Schwarzeneggar နှင့် Martha Stewart တို့ဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ​နောက်​တစ်​ခု
Blaze energy အတွင်းမှာကျ​ရောက်​​နေတဲ့ Supporter က​တော့ လူ​တွေနဲ့​ တ​ပျော်​​တပါးဆက်​ဆံကာ အသင်းတစ်​ခုကို ဦး​ဆောင်​သွားတတ်​ကြပါတယ်​။ Stars ​တွေက​တော့ မိမိကိုယ်​တိုင်​ ထွန်းလင်း​နေကြပြီး Supporter က​တော့ အခြားသူထွန်းလင်း​တောက်​ပ​အောင်​ ဦး​ဆောင်​ပြုလုပ်​​ပေး​လေ့ရှိပါတယ်​။ အရှင်းဆုံး​ပြောရရင်​​တော့ သူတို့ဟာ Consultant တစ်​ဦးပါဘဲ။ မိမိရဲ့အသင်းမှ အသင်းသူများအား ပြုလုပ်​နိုင်​စွမ်းဖြစ်​တဲ့ ယုံကြည်​မှုကို​ဖြစ်​​ပေါ်​စေပြီး တစ်​ပါးသူရဲ့အကြံကို အ​ကောင်​အထည်​​ပေါ်​အောင်​ပြုလုပ်​​ပေးကြတာဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ တစ်​ပါးသူကိုအ​ထောက်​အပံ့​ပေးလိုက်​တာက ကိုယ့့်အတွက်​ အဆမတန်​အမြတ်​​ငွေပိုရနိုင်​တာဖြစ်​တဲ့အတွက်​ မိမိဘာသာလုပ်​ငန်းတစ်​ခုကိုအစမ​ဖော်​သင့်ဘဲ အခြားဖန်​တီးသူကိုသာ ​ထောက်​ပံ့​ပေးသင့်ပါတယ်​။ ဥပမာ​ပြောရရင်​ Microsoft ကိုတည်​​ထောင်​ခဲ့တဲ့ Steve Ballmar ဟာ အခြားတီထွင်​သူဖြစ်​တဲ့ Bill Gate ကို မိမိရဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ​နေရာတစ်​ခု​ပေးလိုက်​တာဖြစ်​ပြီး အခုဆို Bill Company မှ အမြတ်​​ငွေနှစ်​စဉ်​ ၁ဘီလီယံ​ဒေါ်လာ​ကျော်​ ရရှိ​နေလျှက်​ရှိပါတယ်​။ နာမည်​ကြီး Supporter​တွေက​တော့ Steve ballmer ၊ Meg Whitman ၊ Howard Schultz ၊ Genni Romalty အစရှိတာ​တွေဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ Blaze နဲ့ Tempo energy အတွင်းမှာကျ​ရောက်​တဲ့ Deal Maker အ​ကြောင်း​ပြောရရင်​ သူဟာလူသားအားလုံး ​အကျိုးရရှိဖို့အတွက်​ အသင်းသူ၊ အသင်း​သားများအားလုံးကိုသာမက ထိုသူများရဲ့အကြံသစ်များကိုပါ တစ်​စုတစ်​စည်း​တည်း​ပေါင်းစပ်​​ပြီး ညှိနှိုင်းလုပ်​​ဆောင်​တဲ့​နေရာမှာ အလွန်​​တော်​သူဖြစ်​ပါတယ်​။ မိမိဘာသာတီထွင်​ပြီးလုပ်​​ဆောင်​တတ်​တဲ့လူမျိုးမဟုတ်​ဘဲ အချိန်​နဲ့အညီ​ပြောင်း​လဲ​နေတဲ့ ကမာ္ဘ့​ဈေးကွက်​တို့ကို နားစွင့်ပြီးလုပ်​​ဆောင်​ကာ တစ်​ခဏအတွင်းမှာပင်​ သန်း​နဲ့ချီတဲ့အမြတ်​အစွန်းများရရှိနိုင်​ပါတယ်​။ Stars ​တွေရဲ့တန်​ဖိုးက သူတို့ကိုသုံးနိုင်​မှုရှား​လေ​လေ တန်​ဖိုးမြင့်​လေ​လေဖြစ်​​ပေမဲ့ Deal Maker ​တွေက​တော့ သူတို့ကိုများများသုံးနိုင်​​လေ သူတို့တန်​ဖိုးမြင့်​လေ​လေဖြစ်​ပါတယ်​။ သူတို့ဟာ phone တစ်​လုံးနဲ့ အမြဲမပြတ်​သွားလာလှုပ်​ရှား​နေကြလျှက်​ရှိပါတယ်​။ ​ဈေးကွက်​ထဲမှာ လူ​တွေနဲ့ အဆက်​အသွယ်​အမျိုးမျိုးပြုလုပ်​​နေကြပြီး အ​ရောင်းအဝယ်​ အ​ပေးအယူများကို စဉ်​ဆက်​မပြတ်​လုပ်​​ဆောင်​ကာ ​ငွေအ​မြောက်​အမြားရှာ​ဖွေလျှက်​ရှိကြပါတယ်။ တချို့​အောင်​မြင်​​နေတဲ့ Deal Maker ​တွေက​တော့ အ​ကောင်း​ဆုံးဖြစ်​မယ့် အ​ပေးအယူများကို ​ဈေးကွက်​ထဲမှ ရှာ​ဖွေပြီး ကြီးပွား​အောင်​ပြုလုပ်​​နေကြပါတယ်​။ ​အောင်​မြင်​​နေတဲ့ Deal Maker ​တွေက​တော့ အ​မေရိကန်​သမ္မတ Donal Trump ၊ Rupert Murdoch ၊ Masayoshi Son နှင့် Charles Koch အစရှိတဲ့သူ​တွေဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။
တဖန်​ Tempo Energy အတွင်းမှာရှိ​နေတဲ့
Traders ​တွေက​တော့ တရားမျှတစွာအလုပ်​ကိုလုပ်​​ဆောင်​ကာ မည်​သူကမည်​သူ့ကို မကြိုက်​သလဲ၊ စိတ်​ဆိုး​နေလဲအစရှိတာ​တွေကအစ အ​သေးစိတ်​သိရှိသိ​နေသူ​တွေပါ။ သူတို့ရဲ့သဘာဝအရ သူတို့ဟာအချိန်​နှင့်အမျှလုပ်​​ဆောင်​လျှက်​​ရှိပြီး ​မေးမှသာ ​ဖြေတတ်​တဲ့လူစားမျိုး​တွေဖြစ်​ကြပါတယ်​။ Deal Maker များကဲ့သို့ အရာအားလုံးကိုနားစွင့်​နေတတ်​ကြ​ပေမဲ့မတူတဲ့တစ်​ချက်​က သူတို့ဟာလူ​တွေကိုစုစည်းပြီးအ​ပေးအယူလုပ်​ကြတာမျိုးမဟုတ်​ဘဲ ​ငွေများကို အ​ရောင်း​အဝယ်​ပြုလုပ်​ကြသူများဖြစ်​ပါတယ်​။ ​တန်​ဖိုးနည်းနည်း​ဖြင့် ​ငွေကိုဝယ်​ပြီး အမြတ်​​ငွေများများနှင့်​တဖန်​ပြန်​ရောင်းကြသူများဖြစ်​ပါတယ်​။ လူ​တွေနဲ့ပူးပူး​ပေါင်း​ပေါင်း​နေ​လေ့ရှိတတ်​တဲ့ Extrovert Trader ​တွေက​တော့ ​ဈေး​တွေကိုညှိနှိုင်းပြီး အ​ရောင်းအဝယ်​ပြုလုပ်​တတ်​ကြပြီး ဘာသိဘာသာ​နေတတ်​တဲ့ Introvert Trader ​တွေက​တော့ ​မျက်​နှာချင်း​ဆိုင်​လေလံတင်​တာမျိုး​ထက်​ ​အောင်​မြင်​​နေတဲ့ Trader ​တွေရဲ့အကူအညီအကြံများဖြင့် သေချာဆန်း​စစ်​ပြီးမှ ပြုလုပ်​တတ်​ကြပါတယ်​။ Creator နဲ့ Trader တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်​ကြည့်လျှင်​ Creator ​တွေက​တော့ မိမိကိုယ်​အတွင်း​သို့ထည့်သွင်း​ရတဲ့သ​ဘော​ဆောင်​ပြီး Trader ​တွေက​တော့ မိမိဆီမှခွဲထုတ်​လိုက်​ရတဲ့သ​ဘော​ဆောင်​ပါတယ်​။ အရှင်းဆုံးနည်းနဲ့​ပြောရမည်​ဆိုပါက သံစုံတီးဝိုင်းမှာ ​တေး​ရေး၊ စာ​ရေးတဲ့သူများကို Creator များဟုတင်​စားနိုင်​ပြီး ​​တေးညွှန်​သူများကို Trader များဟုတင်​စားလို့ရပါတယ်​။ Trader များဟာ အမြတ်​​ငွေကို ​အချ်ိ​န်​ကြာကြာစောင့်ပြီးမှရနိုင်​သလို အချို့ကျ​တော့လည်း အ​ရောင်းအဝယ်​ပြုလုပ်​​နေစဉ်​အတွင်းမှာဘဲရရှိကြပါတယ်​။ ပုံမှန်​အားဖြင့်​တော့ Trader အများစုဟာ သူတို့ကုမ္ပဏီမှာ အ​ရောင်း​ (သို့မဟုတ်​) အဝယ်​ဖြစ်​တဲ့ တစ်​ဖက်​တည်း​သောအလုပ်​ကိုသာ လုပ်​​လေ့ရှိကြပါတယ်​။ အလွန်​​တော်​ပြီး သတိကြီးတဲ့သူများကသာ အ​ရောင်း​သာမအဝယ်​လမ်း​ကြောင်းကိုပါ ပိုင်ပို​င်​နိုင်​နိုင်​လုပ်​​ဆောင်​တတ်​​လေ့ရှိကြပါတယ်​။ ​အောင်​မြင်​​ကျော်​ကြားခဲ့တဲ့ Trader ​တွေက​တော့ George Soros ၊ Jim Rogers ၊ Carl Icahn နှင့် Melinda Gates အစရှိတဲ့သူများဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ Tempo နဲ့ Steel Energy အတွင်းမှာကျ​ရောက်​​နေတဲ့ Accumulator ​များက​တော့ အလွန်​​တော်​တဲ့ Project manager များနှင့် reasearcher ​လေ့လာသူများဖြစ်​ပါတယ်​။ သူတို့ဟာ ရှိပြီးသားအချက်​အလက်​​တွေကို​ ​ကောက်​ယူတတ်​တဲ့သူ​တွေဖြစ်​တဲ့အတွက်​ သူတို့ကိုအရမ်း​မျှော်​လင့်ပြီး အသစ်​ဖန်​တီးခိုင်း​လို့​တော့မရနိုင်​ပါဘူး။ Trader များက ​ငွေ​ပေါ်မှာမူတည်​ပြီး အ​ရောင်းအဝယ်​ပြုလုပ်​ကြ​ပေမဲ့ Accumulator များက​တော့ ​ပြောင်းလဲ​နေတဲ့ ​ငွေ​ဈေး​ပေါ်မှာမူတည်​ပြီး ​ငွေကိုဝယ်​ကာ မ​ရောင်းဘဲ ကိုင်​ထား​လေ့ရှိပါတယ်​။ နားလည်​​အောင်​​ပြောရရင်​သူတို့ဟာ ​ငွေကိုစု​ဆောင်​ပြီး အမြတ်​​ငွေပိုများ​အောင်​ပြုလုပ်​တတ်​တဲ့လူစားမျိုး​တွေပါ။ ​ဘောလုံးအသင်းနဲ့ ဥပမာပြရရင်​ ​ရှေ့တန်းဂိုးသွင်းသမားက​တော့ Stars လူမျိုးများဖြစ်​ပြီး ဂိုးဖမ်းသမားက​တော့ Accumulator ဖြစ်​ပါတယ်​။ အချိန်​တိုင်းစု​ဆောင်းနေတတ်​ပြီး ကူညီတတ်​သူတစ်​ဦးတစ်​​ယောက်​မ​ပေါ်​ပေါက်​လာပါက ကျရှုံးမှုမျိုးနဲ့​ကြုံ​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​။ အကယ်​၍မှန်​ကန်​တဲ့ အသင်း​အဖွဲ့တစ်​ခုခုနဲ့ အဆက်​အသွယ်​ရရှိသွားပါက မိမိလုပ်​ရမယ့်​အချိန်​မှာ လုပ်​သင့်​တာကို လုပ်​​ဆောင်​နိုင်​ကာ ​အောင်​မြင်​မှုမျိုးရရှိသွားနိုင်​ပါတယ်​။ ​ဥပမာ​ပေးရရင်​ အောင်​မြင်​မှုရရှိခဲ့တဲ့ Accumulator ​တွေက​တော့ Warren Buffett ၊ Benjamin Graham ၊ Carlos Slim နှင့် Leonardo Del Vecchio အစရှိတဲ့သူများဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။
Steel Energy အတွင်းမှာကျ​ရောက်​​နေတဲ့ သူများကို Lord များဟု ​ခေါ်ကြပါတယ်​။ သူတို့ဟာ အချက်​အလက်​များကို Detail အလိုက်​ အတွင်း​ကျကျရှာ​ဖွေနိုင်​ပြီး ​အချက်အလက်များအား​​လေ့လာရာမှာ အလွန်​​တော်​ပြီး ထိုအချက်​များ​ပေါ်မှာမူတည်​ပြီး ဆုံးဖြတ်​ချက်​​ကောင်း​ကောင်း​ချတတ်​ကြပါတယ်​။ သူတို့ဟာ ပစ္စည်းတစ်​ခုခုကိုပိုင်​ဆိုင်​စရာမလိုအပ်​ဘဲ ​​Cash flow များကိုဆွဲယူနိုင်​ပြီး သန်းကြွယ်​ဖြစ်​လာနိုင်​ပါတယ်​။ ဥပမာ​ပြောရရင်​ Rockefeller ဟာ ဆီလုပ်​ငန်းထဲမှာ သန်းကြွယ်​ဖြစ်​လာ​သော်​လည်း​ သူ့မှာဆီတွင်းတစ်​တွင်းမှမရှိပါဘူး။ တဖန်​ Mittal ဟာဆိုရင်​လည်း မိုင်းတွင်းများမရှိ​ဘဲ steel ​အရောင်း​အဝယ်​​လောကမှာ သန်း​ကြွယ်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​သူတို့ဟာ​ရှာတွေ့သမျှ Cash Flow တိုင်းကို စု​ဆောင်​ပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု​​လှည့်ကွက်​များဖြင့် ကစားသွားခြင်း​ဖြစ်​ပါတယ်​။ Extrovert Supporter ​တွေက​တော့ အ​ရေအတွက်​​ပေါ်မှာမူတည်​ပြီး လူ​တွေကိုတန်​ဖိုးထားပေမဲ့ Introvert Lord ​တွေက​တော့ လူ​တွေ​ပေါ်မှာမူတည်​ပြီး အ​ရေအတွက်​ကိုတန်​ဖိုးထားကာ နိုင်​ငံ​ရေးနဲ့ပတ်​သက်​တာ​တွေကို အာရုံစိုက်​ဖို့အချိန်​မရှိကြပါဘူး။ Lord ဆိုတဲ့လူမျိုးများဟာ တစ်ဦးတစ်​​ယောက်​ပေါ်မှာမှီခိုခြင်းမျိုးမရှိဘဲ အရာရာကိုမိမိကိုယ်​တိုင်​သာပြုလုပ်​ကြတာဖြစ်ပါတယ်​။ မိမိကိုယ်​တိုင်က​လည်း တစ်​ခုခုကိုစိုးမိုးခြယ်​လှယ်​ခွင့့်မရမချင်း ညှာတာစိတ်​မရှိဘဲအရာရာမှာ မည်​သူ့ကိုမျှဂရုမစိုက်ပဲ လုပ်​​ဆောင်​ကြပါတယ်​။ မိမိလုပ်​နည်းထုံးစံအတိုင်း အချိန်​နဲ့ တီထွင်​နိုင်​စွမ်းရည်​များကိုလည်း ပြစ်​ပယ်​ထားနိုင်​ပြီး Cash flow များကိုသာ စု​ဆောင်း​နေကြတာဖြစ်​ပါတယ်​။ Andrew Carnegie ၊ Larry Page ၊ Angela Merkel ၊ Indra Nooyi နှင့် Mukesh Ambani အစရှိတဲ့သူ​တွေဟာ ​အောင်​မြင်​​ကြော်​ကြားခဲ့တဲ့ Lord လူမျိုးများဘဲဖြစ်​ကြပါတယ်​။
Steel နဲ့ Dynoam energy အတွင်းမှာကျ​ရောက်​​နေပြီး အရာရာကို အ​ကောင်းဆုံး အဆုံးသတ်​နိုင်​စွမ်း​ရှိတဲ့သူများကို Mechanic များဟုတင်​စား​ခေါ်​ဝေါ်ကြပါတယ်​။ တစ်​ခုခုမပြုလုပ်​ခင်​မှာ အပိုုင်း​များအဖြစ်​ အရင်​ဆုံးခွဲခြမ်းလိုက်​ပြီး ​ထိုအစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်​လည်​​​ပေါင်းစပ်​ဖို့ အ​ကောင်းဆုံးနည်းလမ်း​ကို ရှာ​ဖွေကြသူများဖြစ်​ပါတယ်​။ Creator က​တော့သူတို့့ရဲ့ဦး​နှောက်​ကိုအသုံးပြုပြီး အစပြုဖန်​တီးခဲ့သလို Mechanics က​တော့ သူတို့ရဲ့လက်​များကို အသုံးပြုပြီး ပစ္စည်းတစ်​ခုကို အဆုံးသတ်​ပုံအားစဉ်းစား​တွေး​ခေါ်ရတာဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ Mechanics ​တော်​​တော်​များများမှာ မိမိတို့ရဲ့ပြိုင်​ဘက်​ကုမ္ပဏီများထက်​ပို​ကောင်းတဲ့ ကိုယ်​ပိုင်​စနစ်​များကိုယ်​စီရှိ​နေကြ​သော်​လည်း မိမိတို့ရဲ့ အထက်​မှ အမိန့်နည်းအတိုင်း ပြုလုပ်​ရ​လေ့ရှိတဲ့အတွက်​ ဒီစနစ်​​တွေမှာမိမိရဲ့အ​တွေးဖြင့် အသစ်​ဖန်​တီးဖို့ရာမှာ ကြာ​နေလျှက်​ရှိပါတယ်​။ အဲ့အတွက်​ မိမိနည်း​အတိုင်း ​ပြောင်း​လဲလွှဲ​ပြောင်းနိုင်​ခွင့်ရတဲ့အချိန်​မျိုးမှာမှ ​ကောင်း​မွန်​တဲ့ရလဒ်​မျိုးရရှိနိုင်​ကြပါတယ်​။ ​အောင်​မြင်​ ​ကျော်​ကြားခဲ့တဲ့ Mechanics များမှာ Mark Zuckerberg ၊ Hery Ford ၊ Sam Walton နှင့် Jelf Bezos အစရှိတဲ့သူများဖြစ်​ပါတယ်​။
DISCS Model ဟာလည်း Coaching model တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဆို Coaching process တစ်မျိုးဖြစ်သလို ပြသာနာတွေဖြေရှင်းရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ Problem Solving Model အဖြစ်လည်းပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီ model ဟာဆို Client အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ခါနီး ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေကို သူ့ကိုယ်သူမေးသင့်လဲစတဲ့အချက်များကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Support စတဲ့စကားလုံးများရဲ့အစစာလုံးလေးတွေကိုစုစည်းပြီး DISCS Model အဖြစ် Jamie ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်က သူကိုယ်တိုင်ပြဌန်းပြီး နာမည်တပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
💥💥ပထမဆုံး Discover ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်၊ အိမ်မက် နှင့် နောက်ဆုံးပန်းတိုင်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ မေးခွန်းများကို စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် သင့်ရဲ့ business ဟာဆိုရင် နောက် ၅ နှစ်နေရင် ဘယ်နေရာအထိ ရောက်နေမယ်လို့ထင်လဲ။ အဲ့အခြေအနေက ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ။ သင့်အတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရမလဲ။ စတာတွေက Discover အပိုင်းမှာ စဉ်းစားရမယ့် မေးခွန်းအချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု Identify ကတော့ အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနှင့် ကိုယ်မှန်းထားတဲ့အခြေအနေကြားမှာကွာခြားနေတဲ့ gap ကိုဆန်းစစ်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာ ဘယ်နေရာမှာ ရောက်နေပြီလဲ။ ဘယ်အရာကကိုယ့်အတွက် ကောင်းကျိုးတွေပေးပြီး ဘယ်အရာတွေက အဆင်မပြေမအောင်မြင်မှုတွေပေးလဲ စတာတွေကို စဉ်းစားပြီး လုပ်သင့်တာကိုလုပ်ပြီး မလုပ်သင့်တာကို မိမိဘာသာစဉ်းစားပြီး မလုပ်ပဲနေသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု Strategize ကတော့ brainstorming လုပ်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် idea တွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စဉ်းစားရပါမယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေများ ၊ ရွေးချယ်သင့်တဲ့အချက်များနှင့် tools ကိရိယာအမျိုးမျိုးကို ပေါင်းစပ်ပြီး စဉ်းစားရပါမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရမယ့်မေးခွန်းတွေကို ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်ရမယ့် options တွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လို idea တွေကို အကောင်အထည်ဖော်သင့်လဲ၊ နောက်ပြီး အခြားသူတွေအတွက်ရော ဘယ်လိုလုပ်တာတွေက သူတို့အတွက် အဆင်ပြေစေခဲ့လဲ စတာတွေကို အဆက်မပြတ် စဉ်းစားနေသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု Chart ဟာဆိုရင် အလားအလာရှိတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကိုအသုံးပြုပြီး ရှေ့ဆက်ကာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်သွားရပါမယ်။ ဥပမားီလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်နေပြီလဲ၊ သင်ကရော ဒါကိုဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ၊ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ အစပျိုးမလဲ နဲ့ ဒါကိုလုပ်ဖို့ လူအင်အား၊ ငွေအင်အားဘယ်လောက်လိုလဲ စတာတွေကို အထူးစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု Support အပိုင်းမှာတော့ တာဝန်ယူမှုအပြည့်ရှိတဲ့ အဆင့်တွေကို လုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မိမိပြုလုပ်ရမယ့်ပထမဆုံးအဆင့်ကဘာလဲ၊ ထိုအဆင့်ကို ဘယ်အချိန်မှာ စလုပ်မလဲ နဲ့ မိမိတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ progress အဆင့်များကို ဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲ စတာတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နိဂုံးအနေနဲ့ပြောရမည်ဆိုပါက အထက်ဖော်ပြပါ အချက် ၅ ချက်ကို ပေါင်းစီးပြီး မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရာတွင် ထိုအချက်များကို ကိုးကားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
A5 Coaching model အကြောင်းသိကောင်းစရာ
A5 ဆိုတာကလည်း Coaching model တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Sanjay Nangalia ကဖန်တီးဖော်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး Client တစ်ယောက်နဲ့ Coach တ်ို့ဟာ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ အပြန်အလှန် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
A5 လို့နာမည်ပေးရခြင်းကတော့ A နဲ့ စတဲ့စကားလုံး ၅ လုံး ပါဝင်လို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံး ၅ လုံးကတော့
ဒီအချက်တွေအားလုံးကို Client သာမက Coach ကပါ လုပ်ငန်းကို စနစ်ကျကျလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးတယူစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ post မှာ အဓိကပြောချင်တာက Client ကို Coach တစ်ယောက်က လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် အောင်မြင်အောင် စဉ်းစားရမယ့်အချက်များကို Guide လုပ်ပြီး သင်ပေးရမယ့်အပိုင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
Coach တစ်ယောက်က Client တစ်ယောက်ကို သင်ပေးသင့်တဲ့ အချက်တွေထဲကမှ ပထမအချက်က Awareness ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက မိမိကိုယ်ကို သိရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Client ကိုယ်တိုင်က မိမိလုပ်ငန်းမှာလုပ်ရမယ့်အကြောင်းတွေကို မသိတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် Coach ဘက်မှ Client ကို ကိုယ်လုပ်မယ့်အရာတွေကို အသေးစိတ်သိရှိနေရပြီး မိမိဘာလိုချင်သလဲ စတာတွေကို Coach ကို ပြောပြပေးရပါမယ်။ Coach ကလည်းထိုအရာတွေကို သိရှိဖို့ Client ကို အသေးစိတ်မေးမြန်းထားမှ မိမိရဲ့ပန်းတိုင်ကို အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်မှာပါ။
နောက်တစ်ချက် Alternatives ကတော့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပြသာနာ Issues တွေကို ဖော်ထုတ်ရပါမယ်။ ဒီအဆင့်ကတော့ အရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း Client ကိုအတိအကျပြန်မေးရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ဖို့အချက်အလက်တွေအများကြီးထဲကမှ ဘယ်အရာကိုလုပ်ကိုင်ရတာ ပိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတာတွေကို မေးရမယ့်အပိုင်းပါ။ Client ဘက်ကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချက်မှာလည်း ဘယ်လို issues တွေရှိနိုင်လဲ စတာတွေကို သိနေရပါမယ်။ အဲ့အတွက် Client ဘက်မှ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချက်မှာရှိတဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုကျိုးတွေကို Coach ကိုယ်တိုင်က သိနေရမယ့်အပြင် Client ကိုလည်း ပြောပြပေးရပါမယ်။ သို့မှသာ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို လွယ်ကူစွာ ရောက်ရှိမှာပါ။
Action ကတော့ စောစောက option တွေအများကြီးထဲကမှ တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး စတင်လုပ်ကိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင် Client ဘက်မှ သူအဆင်ပြေတဲ့ အချက်ကို လုပ်ကိုင်ပြီး လုပ်ငန်းကို SMART ဖြစ်စေချင်တာပါ။ ပြောချင်တာက Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်အောင်ပြောရမည်ဆိုပါက ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရရှိလာမယ့်ရလဒ်က တိကျရမယ်၊ တိုင်းတာနိုင်ရမယ်၊ ရယူနိုင်လောက်အောင်ကောင်းရမယ်၊ စစ်မှန်ရမယ်၊ နောက်တစ်ခုက သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပြီးစီးမှုရှိရမယ်။
နောက်တစ်ခု Accountability အပိုင်းကို ဆက်လက်ပြီးပြောပြပါမယ်။ သူကတော့ တာဝန်ယူနိုင်မှုကိုပြောချင်တာပါ။ အရှေ့မှာပြီးစီးသွားတဲ့ action steps တွေကို Coach ဘက်မှပြန်စစ်ရမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ client နဲ့ Coach အကြားမှာ သဘောတူထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် action steps များအားလုံးပြီး၊ မပြီး Client ဘက်မှ review ပြန်စစ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Appreciation ဖြစ်ပါတယ်။ Client ကို Coach ဘက်မှ ကူညီပြီး Guide လုပ်ပေးခဲ့သမျှတို့ကို Client ဘက်မှ အသိအမှတ်ပြုပြီး ကျေးဇူးတင်ရပါမယ်။ ဒါတွေအားလုံးကိုဖတ်ရှုပြီး Coaching အပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Peter Hawkins ဖန်တီးထားတဲ့ CLEAR Coaching Model အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ သူဟာဆို စကားလုံး ၅ လုံးဖြစ်တဲ့ Contract, Listen, Explore, Action နဲ့ Review တို့ရဲ့ နာမည်အစတွေကို ယူထားပြီး CLEAR model အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒီ post မှာ CLEAR model ရဲ့အချက် ၅ ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်းစီပြောပြချင်ပါတယ်။
💥ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ Contract ကိုတော့အားလုံးသိကြမှာပါ။ Contract ဟာဆိုရင် မည်သည့်အရာကိုအသားပေးလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင် Goal ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ ၂ ဦးသဘောတူစာချုပ်,ချုပ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Contract အပိုင်းဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက် လောလောနဲ့မလုပ်ဆောင်သင့်ပါဘူး။ Contract လုပ်ပြီးလို့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနေအထား မရောက်ရှိသေးပါက contract စာချုပ်ကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမှ နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ပါ။
💥ပြီးတဲ့အခါ Listen အပိုင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။ Listen အပိုင်းဟာဆို မိမိရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အကြံတွေကို အချင်းချင်း ဖလှယ်စေပြီး အားလုံးရဲ့အကြံတွေကို နားထောင်ရတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် attention ပေးစေချင်တာပါ။ သူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကို ကိုယ်ကစိတ်ပါပါနဲ့နားထောင်နေတယ်ဆိုပြီး ပြုလုပ်ပြသင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုလည်း နားလည်ပါတယ်လို့ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောပြသင့်ပါတယ်။ သူတို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးများကိုလည်း အာရုံစိုက်နားထောင်သင့်သလို အဓိကကျတဲ့အမေးအဖြေများလဲ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
💥နောက်တစ်ချက် Explore ကတော့ စူးစမ်းရှာဖွေတာကိုပြောချင်တာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒီ project ထဲမှာ ဘယ်လောက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေလဲ စတာတွေကို ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ meeting တစ်ခုခုလုပ်နေပါက မိမိရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့ အဆိုများကို လူအများရဲ့ရှေ့မှောက်ကို ပို့ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပင်မဟုတ်ပဲ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ရုံးလုံးကို မိမိရဲ့သြဇာကလွှမ်းမိုးနေသင့်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် မိမိဘက်ကလည်း မိမိကိုယ်ကို လွှမ်းမိုးမှုရှိ၊ မရှိ ဆန်းစစ်ကာ အခြေအနေမဟန်ပါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲယူသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် အဆက်အသွယ်ပိုများလာမှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
💥Action ကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ အရှေ့မှာပြုလုပ်ထားတဲ့ plan တွေကို ဒီအချက်မှာစတင် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အရှေ့က Contract အဆင့်မှာလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကတ်ိကိုဒီအဆင့်မှာ အကောင်ထည်ဖော်ရပါတော့မယ်။ အတည်မပြုလုပ်ခင် အစမ်းအနေနဲ့ အရင်ဆုံးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ပြီးမှအရင်ကချမှတ်ခဲ့တာနဲ့ ဘယ်လောက်ကိုက်ညီမှုရှိလဲ စတာတွေကို အကဲခတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ who, what, when, where နဲ့ how စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒီအဆင့်မှာ မိမိကိုယ်ကိုမေးပြီးစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက why ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဒီအဆင့်မှာ သိပ်မသုံးသင့်ဘဲ Explore နဲ့ Listen အဆင့်မှာသာအသုံးများတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ အဓိကထားပြီး အရာရာကို detail ကျကျသွားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
💥နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ Review ကိုလည်းအားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီအဆင့်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသား အထက်ပါအချက်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရပါတယ်။ တကယ်တမ်းဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာတွေကို ဒီအဆင့်မှာ သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ client ကအရေးကြီးတဲ့သူဖြစ်သွားပါတယ်။ Client လိုအပ်တဲ့အနေအထားရောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်။ Client ရဲ့ feedback တွေကိုကြည့်ပြီး မိမိဘက်မှလုပ်စရာလိုအပ်ရင် ပြန်လည်အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ မိမိဘက်က ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေသေးလဲ၊ ဘာတွေကယခုလက်ရှိအဆင်မပြေဖြစ်နေလဲ စတာတွေကို စဉ်းစားပြီးအဆုံးသတ်ရပါမယ်။
© Today Business 2020